Akụkọ ụlọ ọrụ - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
Ezinụlọ ndị nkịtị ga-etinye mmiri ozuzo, ma ụdị ịsa ahụ ga-adị iche, na ụdị dị iche iche na ụdị dị iche iche ga-adị iche, n'ihi ya, anyị ga-aghọta ụfọdụ banyere mmiri ozuzo, na mmiri ozuzo ga-eji ogologo oge. Ọ bụrụ na enwere nsogbu mkpọchi, otu esi ehicha oghere ịsa ahụ? Kedu usoro nlekọta maka noz......
Otu esi etinye isi igwe ịsa ahụ
Nke mbụ, gbanyụọ isi iyi mmiri, tinye eriri roba na akụkụ nke ọkpọkọ ahụ, mee ka ọkpọkọ ahụ sie ike na njikọ nke ọkpọkọ mmiri, wee jikọọ isi mmiri ịsa ahụ na ọkpọkọ. Mgbe echichi gasịrị, gbalịa ịgbanye mgba ọkụ isi mmiri ịsa ahụ. Ọ bụrụ na enweghị nsogbu, naanị Ọ dịla njikere iji.
Otu esi agbagide isi mmiri ịsa ahụ
Isi mmiri ịsa ahụ nwere obere mmiri na-emepụta, na a pụrụ itinye mgbapụta mgbapụta ma ọ bụ isi mmiri ịsa ahụ nwere ọrụ nkwalite na ya. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụrụ na emeghe valvụ ntinye mmiri dị ntakịrị, isi mmiri ịsa ahụ nwere obere mmepụta mmiri. N'oge a, ọ dị mkpa ka e meghee valvụ ntinye mmiri nk......
Kedu ihe bụ eriri ịsa ahụ kacha mma?
Na mgbakwunye na isi mmiri ịsa ahụ dị mma n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ, eriri ejikọrọ bụkwa akụkụ dị mkpa.
Ihe na-akpata mmebi nke eriri ịsa ahụ na ụzọ nrụzi
Ihe nwere ike ime: nrụnye na-ekwesịghị ekwesị, nrụrụ mgbanaka rọba, nkwonkwo ọkpọkọ na-adịghị mma ma ọ bụ dị oke mkpa, na adabaghị n'etiti eriri na ịsa ahụ.
Kedu ka esi ahọrọ kọlụm ịsa ahụ?
Ị nwere ike imetụ kọlụm ịsa ahụ aka ka ị nwee mmetụta nke elu na mmetụta.